Ifashoni - Imagazini yoyilo
Amacici Amacici aphefumlelwe nguMthi weAlmond eBlossom apeyintwe nguVan Gogh. Ukuthandeka kwamasebe kuphinda kuveliswe ngamakhonkco odidi lweCartier athi, njengamasebe, abhabhe ngumoya. Imibala eyahlukeneyo yeelitye ezahlukeneyo, ukusuka phantse kumhlophe ukuya kwipinki ebukhali ngakumbi, imela izithunzi zeentyatyambo. Iqela leentyatyambo eziqhakaza limelwe zii-cutstones ezahlukeneyo. Yenziwe ngegolide ye-18k, iidayimani ezipinki, ii-morganites, isafire eluhlaza okomhlaza opinki kunye ne-pink tourmalines. Ukugqitywa kwenziwe ishedyuli. Ukukhanya kakhulu kwaye kufanelekile ngokufanelekileyo. Oku kukufika kwentwasahlobo ngendlela yejeli.
Iingxowa Zezandla Njengokuvela koyilo labashicileli kubonisa ukutshintsha ukusuka kwifomathi ebuntsokothileyo ebonakalayo ukuya kwifomati-ecocekileyo, elula yejometri, Qwerty-elemental kukubonisa amandla, ulungelelwano kunye nokulula. Amalungu enziwe ngentsimbi enziwe ngobugcisa ahlukileyo kwizinto ezibonakalayo zemveliso, enika isikhwama imbonakalo yoyilo. Ubaluleko olubalulekileyo kwingxowa zizitshixo zokuchwetheza ezimbini ezizezazo kwaye zihlanganiswe ngumyili ngokwakhe.
Ukuqokelelwa Kwamabhinqa Ingqokelela, iMacaroni Club, iphefumlelwe yiMacaroni & # 039; s ukusuka phakathi kwinkulungwane ye-18 ibadibanisa nabantu banamhlanje abathengisa iilogo. IMacaroni yayiligama lamadoda agqitha kwimida eqhelekileyo yefashoni eLondon. Babengama-logo mania enkulungwane ye-18. Olu qokelelo lujolise ekubonakaliseni amandla e-logo ukusuka kwixesha elidlulileyo ukuya kwangoku, kwaye liyila iMacaroni Club njengento eyedwa. Iinkcukacha zoyilo ziphefumlelwe ukusuka kwisinxibo seMacaroni ngo-1770, kunye nefashoni yangoku yefashoni enomthamo omkhulu kunye nobude.
Ixesha Lokujonga Ixesha
Ixesha Lokujonga Ixesha I-Argo nguGravithin liwotshi elinokuma ixesha uyilo liphefumlelwe nge-sextant. Inomzobo obhalwe kabini kwi-dial eqingqiweyo, efumaneka kwi-shades ezimbini, kwi-Deep Blue kunye noLwandle oluMnyama, ngokuhlonipha i-argo yenqanawa ye-adventures. Intliziyo yayo ibetha ngombulelo kwintshukumo yaseSwitzerland Ronda 705 ye-quartz, ngelixa iglasi yesafire kunye nentsimbi eqinileyo engama-316L iqinisekisa ukumelana ngakumbi. Ikwahambisa amanzi ayi-5ATM. Iwotshi ifumaneka ngemibala emithathu eyahlukeneyo yemibala (igolide, isilivere, kunye nomnyama), ezimbini zokucofa i-shades (e-Blue Blue kunye neLwandle oluMnyama) kunye nemodeli yamabhanti amathandathu, kwizixhobo ezibini ezahlukeneyo.
Ukuqokelelwa Kwamabhinqa Uyilo lwengqokelela yoBuhle beHybrid kukusebenzisa i-cuteness njengeyona ndlela yokusinda. Iimpawu ezinesiseko esihle ziiribhoni, i-ruffles, kunye neentyatyambo, kwaye ziyavuselelwa ngoomatshini bemveli bokuchwephesha kunye neendlela zokuphuma kwi-couture. Oku kuphinda kubuyekeze ubuchwephesha bendlela bokwenza i-hybrid yale mihla, enothando, emnyama, kodwa ikanaphakade. Yonke inkqubo yoyilo lobuhle beHybrid ikhuthaza uzinzo ekuyileni uyilo olungaphelelwa lixesha.
Umsesane UMimaya Dale, umyili wekhonkco lika-Ohgi uhambise umyalezo ongumfuziselo ngale ring. Ukuphefumlelwa kwakhe kwendandatho kwakuvela kwiintsingiselo ezilungileyo ukuba abalandeli baseJapan basongelayo kwaye bathandwa kangakanani kwinkcubeko yaseJapan. Usebenzisa i-18K yegolide etyheli kunye nesafire yezixhobo kwaye bakhupha i-aura yobukhazikhazi. Ngapha koko, fan yokugoba ihlala kumsesane ekoneni enika ubuhle obahlukileyo. Uyilo lwakhe lumanyano phakathi kweMpuma neNtshona.
Amacici Iingxowa Zezandla Ukuqokelelwa Kwamabhinqa Ixesha Lokujonga Ixesha Ukuqokelelwa Kwamabhinqa Umsesane